प्रेम र स्वतन्त्रताको प्रतीक चाड तीज « Swadesh Nepal
प्रेम र स्वतन्त्रताको प्रतीक चाड तीज
तीजलाई चाड भने पनि पर्वको रुपमा माने पनि यो अवसरलाई नेपाली महिलाहरुले महान चाडको रुपमा मनाउंदै आएका छन्। विशेषत: हिजो भन्दा पनि अस्तिका दिनहरुमा जब आजको जस्तो शिक्षा, बाटो, यातायात, टेलिफोनको सुबिधा सर्व सुलभ भैसकेको थिएन त्यसबेला विवाह गरेर टाडा वा नजिक नै पनि घर भएका चेलीहरुका लागि माइत जाने, माइतीलाई भेट्ने, मिठो मिठो परिकार खाने र गीत अनि नाच मार्फत आफ्नो मनको कुरा अभिव्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। विशेषगरी तत्त्कालीन समयमा सासु अनि नन्दबाट सहनु परेको पीडा अनि दु:खलाई यही मौकामा महिलाहरुले गीत मार्फत अभिव्यक्त गरेर मन हल्का पार्ने काम गर्थे। माइतीले पनि वर्ष दिनमा आउने तीजमा आफ्ना छोरीचेलीलाई एक वा दुई दिन अगावै लिन पठाउने चलन थियो. छोरी चेली माइत आएपछि आफ्नो गच्छेल भ्याए अनुसार मिठो परिकार खुवाउने चलन थियो। त्यसैले पनि यो प्रेम र स्वतन्त्रताको अनुभव र अनुभूति हुने चाड हो, पर्व हो. यो चाड सुरु भएको प्रसंग र यो चाडको सन्दर्भमा महिलाहरुले गर्ने स्वतन्त्रता र आनन्दानुभूतिले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ.
तर आज समय धेरै परिवर्तन भैसकेको छ। आज माइतीसंग कुरा गर्न छोरीहरुले तीज नै कुर्नु पर्छ भन्ने छैन। आज बिज्ञान र प्रविधिको विकासले संसार नै एउटा गाउँ जस्तो भैसकेको अवस्थामा फोन, भिडियो च्याट, इमेल, इन्टरनेट आदि विभिन्न् माध्यमबाट चाहेकै समयमा संसारका कुनै पनि ठाउँका मानिससंग मिलिक्कै कुरा गर्न सकिन्छ।
त्यसैले पनि तीज हिजोका दिनका भन्दा आज अलि भिन्न हुँदै गैरहेको छ। हिजोका दिनमा व्रतालुहरु तीजमा विशेषत: महादेवको मन्दिर शिवालयहरुमा पुगेर नाचगाना गर्थे, निर्जला ब्रत गर्थे। आज पनि ब्रत बस्छन, नाच गान पनि गर्छन, मन्दिर पनि जान्छन। तर हिजो आज तीज दुई दिन मात्र मनाएर नपुग्ने भएको छ। तीजको नाममा आजभोली दर एक दिन हैन एक डेढ महिना नै खाइन्छ त्यो पनि निकै ठूला पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्ट वा क्याफेहरुमा। हिजो जे थियो आज पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। नमिल्दा र नसुहाउँदा चलानहरुमा सुधार हुने पर्छ। तर आधुनिकताको नाममा परम्परालाई थिच्ने कामलाई पनि उचित मान्न सकिन्न।
हुन् त् तीज आज केवल एउटा समूह वा जाति विशेषको मात्र नभएर सबैजसो धर्म र सम्प्रदायका महिलाहरुले मनाउन थालिसकेका छ। धार्मिक सहिष्णुताको दृष्टिले यो राम्रो र स्वागतयोग्य कदम पनि हो। तर तीज आज धर्म संस्कार, चाड वा पर्व मात्र नभएर गहना , लुगा र आर्थिक हैसियत प्रदर्शनगर्ने माध्यम पो बन्ने तर्फ अग्रसर भैरहेको हो कि भन्नु पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ। तीजलाई अत्यन्त भड्किलो रुपमा मनाउने हरुलाई देख्दा चाड,पर्व वा त्यौहार मनाउनु पर्छ तर त्यसको नाममा आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई बिर्सिएर भड्किलो रुपले मनाउने र ऋणमा डुब्ने गरी मनाउनु पर्छ भन्ने हैन। भोज पार्टी गर्दा पनि केही बिग्रिन्न तर डर खाने नाममा कति दिन भोज मनाउंदै हिड्ने ? आयश्रोतले नै नभ्याउने गरी चाड मनाउनु कत्ति युक्तिसंगत हुन्छ ? यो अरुले गर्ने प्रश्न हैन चाडपर्व मनाउने व्यक्ति स्वयम् आफूले आफूलाई गर्ने प्रश्न हो ? किनकि चाडपर्व मनाउनुपर्छ आफ्नो गच्छे अनुसार मनाएर रमाउनु पनि पर्छ तर ऋणमा डुबेर हैन।
निश्चय नै आफ्नो संस्कृति आफूलाई प्यारो हुन्छ र हुनु पनि पर्छ। तर संस्कृतिलाई मनाउने नाममा बिकृति पो फैलिन्छ कि भन्नेतर्फ पनि हामी बेलैमा सचेत हुन सक्यौं भने मात्र चाडपर्वको रुपमा हामीले मनाउने हाम्रो संस्कृतिको सुबास अझै फैलिने थियो कि ?